Nde Pound họpụtara Gameweek 34: Premier League + Championship - cheapinternetsecuritysoftware.com
Crunch oge na Asọmpi Onye Mmeri. Obere obere Fight t Premier League, mana ọ ka nwere nhọrọ ụtọ nke ihe ndozi iji banye na Gameweek 34 nke Nde Pound Picks.
MPP, dịka anyị chọrọ ịkpọ ya, bụ mgbagha gịn’efu iji merie jackpot anyị M 1M. O di nwute na nke ahụ adighi nkwa,n’adịghị ka self love inye self # # 2000 anyị. Anyị na-enye ya onye ọkpụkpọ kacha mma anyị kwa izu. Na-atụgharị uche.
Ma ọ bụrụ na ị merie nke ahụ, ị ​​ka nwere ike ijide Gamble 10 Free Bet website Id ịkọ ndị ziri ezi atọ. Maka ama niile banyere ihe nrite na otu esi egwu, lelee ntuziaka ndị mbido anyị.
Mana ọ bụrụ na ịchọghị nke ahụ, lelee nyocha anyị…
Abụọ klọb Premier League abụọ ga-achọ ịdaban’ọkwa nke atọ. Nke a ga – abụ ihe nzuzu nye ndị ka n’ọnụ ọgụgụ, mana Wenezde nwere mmeri ma ha karịrị ike karịa. Gaa n’ihu, Jordan Rhodes.
Marcelo Bielsa v Ryan Mason. Nchịkọta njikwa ma ọ bụrụ na ọ dị otu. Mana Spurs na-etu ọnụ maka ndị agha siri ike ma nwee obi ụtọ Harry Kane nwere ike ịme mmebi na Elland Road.
Imeri atọn’usoro maka Obí mana ha nwere ndị egwuregwu iji hụ ndị ọbịa ahụ; anyị ga-ahọrọ onye isi, onye ndu, akụkọ mgbe ochie Wilfried Zaha itinye mma agha na mma agha.
Njikọ Njikọ Njikọ Njikọ. Mmeri maka City na ha bụ ndị mmeri, ebe Chelsea ka kwesiri ijide ndị Hammers na nke anọ. Riyad Mahrez bụ dike n’etiti izu ma nwee ike ọzọ.
Liverpool na Southampton
Southampton dere mmeri that a ma ama megide Liverpool na mbido oge a mana ọ dịla ala kemgbe ahụ. Nke a kwesịrị ịbụ abalị Satọdee dị mma maka ndị ọbịa – Mo Salah bụ nwoke maka ọrụ ahụ.
Nke a anaghị eti mkpu’kpochapụwo’. Mid-table mmechuihu maka Wolves, Brighton fọrọ nke nta ka ọ dị nchebe… nke a nwere ike wepụta ndị kachasị mma n’otu egwuregwu abụọ gbalịsiri ike inweta ihe mgbaru ọsọ – mana anyị na-aga Mba Goalscorer.
Oge Villa ji ntakịrị mmerụ ahụ Jack Grealish mebie, mana ha etinyela ihe ngosi ụfọdụ d e izu ndị na-adịbeghị anya. Man Utd dị mma maka nke abụọ na ịhụnanya na-aga azụ. Yabụ anyị ga-ewere Ollie Watkins.
West Ham nọ na-asọ oyi megide Burnley ma anyị na-agbada maka Michail Antonio mgbe nkwado unn’izu gara aga. Na Benrahma, Lingard et al na-adọta ụdọ n’azụ, ebe ndị na-agba ọsọ na Hammers ga-eji obi ụtọ na-ehicha aka ya.
Ha agbadabeghị ma ị mara na West Brom ga-alụ ọgụ maka ndụ ha megide ndị Gunners. Ndị ọbịa ahụ bụ ọkacha mmasị, mana anyị na-achọ ndị Baggies ka ha mee ya egwuregwu… Mbaye Diagne bụ ihe anyị họọrọ.
Fulham na Burnley
Fulham gosipụtara ọkụ ọkụ nke ndụ na etiti oge, mana ihe adaalan’akụkụ ma relegation dị egwu. Burnley na – agbanwe agbanwe – na Chris Wood – nwere ike itinye ntu ikpeazụ n’ime igbe ozu.
PlayerTeamFirstAnytimeRhodesSheff Wed13 / 213 / 5KaneSursurs17 / 523 / 25ZahaCrystal Palace21 / 421 / 10MahrezMan City7 / 114 / 5SalahLiverpool13 / 53 / 5Ọ dịghị GoalscorerWolves v Brighton7 / 17 / 1WatkinsAston Villa7 / 5West 5
Azịza nke Background, Terminology na Ajụjụ Ndị Dị Mkpa (Akụkụ 1)
Iwuli ihe omuma na nghota nke oghere ntaneti nwere ike …